Flexible ngerabha Hose, ngerabha Hose, Industrial Hose - Zebung
Hebei Zebung ngerabha Technology Technology Co., Ltd. yasekwa ngo-2003 kwaye ibekwe kwindawo yophuhliso Jing County, kwiPhondo Hebei, China.Ngowama-2015, ZEBUNG amazwe 4 iiseti VP mveliso Italian ulwelo imveliso umbhobho, yandisa imveliso ithumbu oyile elwandle Umgca wepayipi enkulu enobubanzi obukhulu emva kweminyaka engaphezu kwe-17 yophuhliso olukhawulezileyo, uZEBUNG usebenza njengeshishini lenkokeli yetekhnoloji. Imali ebhalisiweyo ye-ZEBUNG inyuke yaya kwizigidi ezingama-59, abasebenzi abangaphezu kwe-150, abasebenzi besayensi abali-10, iinjineli ezintathu eziphezulu, ngaphezulu kweeseti ezili-120 zezixhobo zemveliso.
jonga ngakumbi qhagamshelana nathi
Zonke iimveliso zifumene i-BV ISO9001: 2015 isiqinisekiso senkqubo esemgangathweni yamazwe aphesheya
Iimveliso zethu ziqinisekisa umgangatho
Ngesanti kubunzulu baphantsi Oli Hose
Inkonzo yomthengi, ukoneliseka kwabathengi
IQela loBuchule eliQinisekileyo
Iminyaka elishumi yamava obuchule, inqanaba loyilo olugqwesileyo!
Sebenzisa advanced ukuphathwa kwenkqubo yolawulo lomgangatho we-ISO9001 2000!
Siyazingisa kwiimpawu zeemveliso kwaye silawula ngokungqongqo iinkqubo zokuvelisa, ukuzibophelela ekwenziweni kwazo zonke iintlobo!
Ulwazi lwethu lwamva nje
IZIBUNGO ENTSHA OC 2020 UMBONISO
Uphando oluzimeleyo kunye nophuhliso kwimveliso yeoyile kunye negesi yombhobho uveliso lwe-Hebei Zebung itekhnoloji yerabha co., Ltd iphezulu kwi-Offshore China (Shenzhen) Convention & Exhibition 2019 Nge-20 ne-21 ka-Agasti, i-19 yeTshayina (Shenzhen) yeoyile ye-Offshore yeHlabathi kunye Irhasi Decisi ...
IPHEPHA ELITSHA LOKUGQIBELA
I-1100mm Dredge Hose kunye neFlower Dredge Hose yeYalong No.1. I-Yalong No.1, ixhotyiswe ngezixhobo eziphambili zokwenza umbane kunye nenkqubo yokulawula ukuzenzekelayo, nayo inokumba ilitye elinzima eliphakathi, ilungele iprojekthi enkulu, inokuhambisa udongwe, isanti eshinyeneyo ...
I-010 intshi yeoyile yaselwandle ene-50m ubude ifakelwe ngokupheleleyo kwiprojekthi yasePhilippines Yimibhobho yeoyile yaselwandle yemitha engama-50, eveliswe yiNkampani yeZebang. Uxanduva lwayo kukuhambisa i-oyile ekrwada ukusuka kwiitanki ukuya kwiitanki / kwiindawo zokugcina elunxwemeni. ...